'Chucky' Enweela Ọrụ Onye Na-eto Eto na Ọjọọ Charles Lee Ray - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Chucky' Enweela Ọrụ Onye Na-eto Eto na Ọjọọ Charles Lee Ray
'Chucky' Enweela Ọrụ Onye Na-eto Eto na Ọjọọ Charles Lee Ray
by Trey Hilburn III July 21, 2021 1,389 echiche
Agaghị m agha ụgha, ihe a niile Chucky akụkọ bụ ụfọdụ n'ime ihe na-atọ ụtọ kachasị egwu na-aga n'ihu. SYFY si Chucky ọ dịka ọ ga - abụ olu ma ọ bụrụ na i buru n'uche na Don Mancini ga - aga ihe a, anyị bụ ndị niile na - egbu egbu. Ọhụrụ rad bit nke Chucky ozi ọma, na-agbaso nnukwu ụgbọala na-adọkpụ nke anyị kesara na mbụ n'izu a, bụ nkedo nke nwa okorobịa na onye ọjọọ Charles Lee Ray.
Gbanyụọ, 2019 si The Prodigy ma ọ bụ ihe ọjọọ nke na-eto eto, ga-ewere ọrụ nke Charles Lee Ray na Chucky. David Kohlsmith edoziri ịbanye na ụmụaka ọjọọ ọzọ. O nwere oke egwu na The Prodigy. Ekwenyesiri m ike na ọ ga-emekwa ihe ịtụnanya ebe a.
Tupu mmadu niile enwee uche. Achọrọ m ịkọwa na Brad Dourif ga-enyekwa olu ọzọ Chucky. Ihe ntorobịa Charles Lee Ray niile ga-abụ ihe dị iche.
Na nchịkọta akụkọ maka Chucky na-aga dị ka nke a:
Mgbe a na-atụgharị mkpụrụ osisi Chucky a na-ere ere, a na-atụba obodo na-adịghị mma nke obodo America n'ọgba aghara ka ọtụtụ igbu ọchụ na-eyi egwu na-amalite ikpughe ihu abụọ na nzuzo nke obodo ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ọbịbịa nke ndị iro na ndị enyi si n'oge gara aga nke Chucky na-eyi egwu igosipụta eziokwu n'azụ ogbugbu ndị ahụ, yana isi mmalite nke nwa bebi mmụọ ọjọọ dị ka nwa nkịtị yiri ka ọ bụ onye ghọrọ ajọ anụ ọhịa a.
Chucky si usoro usoro ihe omume asatọ na USA Network na SYFY bido n’Ọktọba 12. you nwere anụrị maka nhọrọ maka Charles Charles Ray Ray na-eto eto? Mee ka anyi mara na ngalaba a.